Kofehy fantsona tanteraka tsara ny faritra misy olana - fomban-draharaha tsara sy mahavariana amin'ny fanatrehana ny valindrihana.
Karazam-borona vita amin'ny plaffa
Toby fanitso dia avy amin'ny fotony. Ny safidy mora indrindra - vokatra voasokitra, noterena izy ireo, ny herin'ny vokatra dia ambany, ny hateviny dia 6-8 mm. Ny kilasy antonony dia ahitana plastika fanindroany: elanelana 9-14 mm, dia mazava tsara ilay sary. Ny heriny dia tratra noho ny fiantraikany avo lenta eo amin'ny fitaovana. Ny kalitao avo indrindra dia heverina ho toy ny vokatra azo avy aminy. Matetika ny tany dia manahaka ny rafitra hazo, marbra, vato. Mahery ny hery, izay misy fiantraikany amin'ny vidiny.
Rehefa mividy fiandrasana ianao dia mila ampiana 10-15% amin'ny famoahana sy ny fako. Vao misafidy fotsiny ny fikajiana ny plastika misy plastika misy elanelana.
Inona no tsaratsara kokoa hanamboarana ny valindrihana?
Ny akofa eo amin'ny fototry ny rano dia azo antoka ho an'ny fahasalamana, saingy miaraka amin'izy ireo amin'ny fotoana maharitra kokoa, rehefa maharitra ela kokoa izy ireo. Raha tsy mety ny mari-pana, dia mety hivoatra ny bakteria sy ny holatra .
Ny azo itokisana kokoa amin'ny famahana azy dia ny molotra amin'ny solvent (mifototra amin'ny alikaola na acetone). Izy ireo dia haingana kokoa sy azo itokisana kokoa amin'ny kofehy. Ilaina ny mamantatra ny mety ateraky ny habaka rehefa mifampikasoka amin'ny volo.
Ny adhesives toy ny hoe "manify" dia manatsara ny adhesion rehefa manasitrana. Izany dia fitaovana tsara ho an'ny efitrano izay matetika manadio, mihamitombo ny fepetra, ohatra, ho an'ny lakozia.
Inona no tsiranoka tsaratsara kokoa ho an'ny plafona vala? Ny lakaoly mitambatra dia heverina ho manerantany. Epoxy sy silicone fototra (manana fofona maivana) manome antoka ny adhesion amin'ny saika mety. Ao anatin'ny tsy fisian'ny rivotra, dia fohy kely ny fafana. Mila miasa bisy ny fiasanao, izay misy fiantraikany amin'ny fandefasana azy.
Ny fihanaky ny ambany, ny fanerena sy ny fanoherana amin'ny fahamendrehana no mahatonga ny "fantsika lava" ho fomba mahazatra amin'ny fametrahana takelaka hosodoko. Mahaiza mora manafina ny tsy fahampian'ny vala. Azonao atao ny mifidy ny akora farany vita amin'ny acrylic. Mampiasainao izany ho toy ny lakaoly, ary manjaitra ny fitifirana.
Kabinetra kiraro misy seza ao an-dalantsara
Laminasa misy lanezy
Tingo ambony vita vita amin'ny vatosoa vita amin'ny pentila
Mpianatra any amin'izao tontolo izao
Ny herin'ny fiainana
Sakafom-bary 120 l
Ahoana no hianaranao hieritreritra tsara?
Toerana avo avo
Sary tena tsara izay tokony hataon'ny ray aman-dreny
Mitolona cellulite ao an-trano
Enti-manaloka ny fiaraha-miasa amin'ny tongotra lehibe
Blouses miaraka amin'ny akanjo fohy - ireo modely tsara indrindra ho an'ny tsiro rehetra
Candles Zalain nandritra ny fitondrana vohoka
Extra dressing of seedlings cucumber
Sakafo avy amin'ny sakafo